Maxaa agab ah oo ay heli karaan kuwa daryeelaya waalidiinta da'da ah? - Cuntooyinka giraangiraha
Maxay yihiin ilaha ay heli karaan kuwa daryeela waalidiinta gaboobay?
Qoraalka maqaalkani waa kan labaad ee taxane saddex qaybood ah oo ku saabsan daryeelka waalidiinta da'da ah. Fiiri Qeybta 1, “Sida loo go'aamiyo haddii waalidiintaada da'da ah ay ka faa'iideysan karaan xoogaa taageero dheeraad ah. ”
Haddii aad go'aansatay in qof aad jeceshahay uu ka faa'iidi karo xoogaa taageero dheeraad ah oo guriga ah, waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato nooca adeegyada taageerada ee la heli karo. Waxay noqon kartaa in qofka aad jeceshahay u adeegsan karo wax yar oo ka caawiya hawl maalmeedkooda - cunto nafaqo leh maalin kasta, qof kaa caawin kara dayactirka cawska ama majarafadda barafka ama xitaa is dhexgalka bulshada oo joogto ah.
Waxaa jira adeegyo badan oo halkaa yaal, waxay kuxirantahay baahida qofka aad jeceshahay. Halkan waxaa ah tusaalooyin yar oo ah waxa laga heli karo si looga caawiyo waalidiintaada ama awoowayaashaa inay ku barwaaqoobaan iyagoo ilaalinaya madaxbanaanidooda
Haddii aad aragto in qofka aad jeceshahay ay dhibaato ka haysato karinta ama helitaanka cunto caafimaad leh, adeegyo dhowr ah ayaa kaa caawin kara. Cuntada Lugaha waxay bixisaa cunnooyin nafaqo leh oo cusub oo la diyaariyey maalin kasta, iyada oo faa'iidada dheeraadka ah ee booqashada ka timid iskaa wax u qabso saaxiib la ah. Ku kaydi albaabka waxay siisaa adeegyo raashinka dadka dhib ku qabo inay dukaanka yimaadaan. Haddii bixinta cuntada caafimaadka leh ay tahay arrin, qofka aad jeceshahay waxaa laga yaabaa inuu u qalmo Barnaamijka Kaalmada Nafaqada Dheeraadka ah (SNAP). Qalabkan ayaa ka caawin kara dadka inay go'aamiyaan inay u qalmaan iyo in kale. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ilaha nafaqada ayaa sidoo kale laga heli karaa iyada oo loo marayo Xalka Gaajada Minnesota.
Haddii qofka aad jeceshahay uu si fudud uga faa'iideysan karo qof jaraya cawska, nadiifinta waddada ama xitaa qaar ka mid ah nadiifinta guryaha ama adeegyada guryaha, tixgeli inaad baarto adeegyada guriga. Waa tan liiska adeegyada guriga dhammaan magaalooyinka Mataanaha ah.
Meals on Wheels waxay siisaa booqashooyin maalinle ah dadka qaata cuntada taas oo noqon karta fursad bulsho oo qiimo leh, laakiin waxaa jira adeegyo dheeri ah oo diiradda la saarayo bixinta barta bulshada ee waayeelka. Walaalaha Yaryar - Saaxiibada Waayeelka lammaaneyaal tabarucayaal ah iyo waayeel dano wadaag ah ka leh hawlaha bulshada. Xarunta sare ee qofka aad jeceshahay sidoo kale waxay u noqon kartaa ilo aad u wanaagsan howlaha bulshada ee xaafadda.
Jimicsigu waa u fiican yahay qof walba, oo ay ku jiraan waayeelka. Haddii ka bixida guriga aysan aheyn wax dhibaato ah, xarumaha waayeelka ama naadiyada caafimaadka ee xaafada ayaa badanaa leh barnaamijyo jimicsi diiradda saaraya. Sneakers Silver waa ilaha weyn ee loogu talagalay dadka waaweyn ee raadinaya barnaamijyada jimicsiga. Kuwa aan awoodin inay si fudud uga baxaan gurigooda, iyagoo tixgelinaya la-tashiga xirfadle daryeel caafimaad oo laga yaabo inuu kula taliyo laylisyo lagu sameyn karo guriga.
Daryeelka guriga gudihiisa ah
Haddii qofka aad jeceshahay uu la kulmayo dhibaatooyin caafimaad, waxaa laga yaabaa inay ka baqaan in caawimaad la helo ay tahay inuu u guuro xarun lagu caawiyo oo lagu noolaado. Waxa laga yaabo inayan ogayn inay jiraan barnaamijyo la heli karo oo bixiya taageerada daryeelka caafimaadka guriga dhexdiisa ah. Ku noolaanshaha Shabakadda Guryaha waa meel fiican oo laga bilaabi karo haddii aad u maleyneyso in daryeelka gudaha uu ku habboon yahay qofka aad jeceshahay. Xitaa wax u fudud sida an nidaamka digniinta caafimaadka degdega ah waxay kaa caawin kartaa qofka aad ka walwalsan tahay inaad hesho taageero haddii xaalad degdeg ahi timaado. Haddii aad go'aansato inaad raacdo mid ka mid ah adeegyadan, ka hubi caymiska qofka aad jeceshahay si aad u aragto waxa laga yaabo inuu daboolayo.
Adeegyada dhaqaalaha / sharciga
Tiro adeegyo ah ayaa loo heli karaa arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharciga ee inta badan la kulma dadka waayeelka ah. Qofka aad jeceshahay miyuu u baahan yahay caawimaad xagga maaraynta kharashka kululaynta ama bixinta daawooyinka loo qoro? Senior Link wuxuu bixiyaa a liiska adeegyada arrimaha guud ee dhaqaalaha ee waayeelka wajaha, sidoo kale adeegyada sharciga sida qorsheynta guryaha.
Tani macnaheedu maahan liistada dhammeystiran ee ilaha, laakiin waa meel fiican oo laga bilaabi karo haddii aad ka walaacsan tahay waalidiinta da'da ah ama kuwa aad jeceshahay. Waa kuwan qaar ka mid ah ilaha daryeelka dheeraadka ah ee sidoo kale kaa caawin kara:
* Adeegyada Daryeelka Wilder
* Xarunta Kheyraadka Daryeelka ee AARP
* Wakaaladda Aagga Magaalada Weyn
Haddii aad qaadatay go'aanka ah in waalidiintaada gaboobay ama kuwa aad jeceshahay ay ka faa'iideysan karaan taageerada dheeraadka ah ee ay bixiso mid ka mid ah adeegyadan, tallaabada xigta ayaa ah inaad iyaga la yeelato wadahadal. Waxaan soo qaadan doonaa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan wada hadalkaan qaybtii ugu dambaysay ee taxanaheenii saddexda qaybood ahaa ee ku saabsan daryeelka waalidiinta da'da ah.
Diisambar 29, 2014